Nepali Rajneeti | प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालकाे को स्वास्थ्य थप बिग्रिदै, अस्पताल भर्ना
प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालकाे को स्वास्थ्य थप बिग्रिदै, अस्पताल भर्ना
बैसाख १५, २०७८ बुधबार ५६३ पटक हेरिएको
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनलाई ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
प्रचण्डको पारिवारिक स्रोतका अनुसार सीतालाई मंगलबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।
अस्पताल पुर्‍याउँदा उनको शरीरमा सोडियमको मात्रा कम पाइएको र आज केही सुधार देखिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । यद्यपि अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज गर्ने भन्ने एकिन छैन ।
सीता दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने जटिल प्रकारको रोग ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पी.एस.पी.)’ बाट पीडित छिन् ।
गत पुसमा उनलाई भारतको नयाँदिल्लीमा उपचार गरी ल्याइएको थियो । हालै उनका छोरीहरुले सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरेको एउटा तस्वीरमा सीताको स्वास्थ्य थप बिग्रिदै गएको जस्तो देखिन्थ्यो ।
सीता दाहालको स्वास्थ्य समस्या के हो ? नेपालमा उपचार सम्भव छैन ?
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्य उपचारका लागि आइतबार अमेरिका जाँदैछन् । छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्यसहित उनीहरु साँझ ५ बजे इत्तेहाद एयरबाट अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।
प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्य विष्णु सापकोटा (जुगल)का अनुसार सीताको उपचार अमेरिकाको जोन हकिङ्स् अस्पतालमा हुने छ ।
नेशनल हेल्थ सर्भिस, ब्रिटेनका अनुसार पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति हो, जसका कारण मानिसको मानसिक असन्तुलनका साथै हिँड्न, बोल्न र निल्नसमेत कठिन हुने गर्छ । मस्तिष्कको कोशिकामा क्षति हुँदा यस्तो समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि सीतालाई रोगले झन च्यापेको छ । त्यसैले सीताको मन बहलाउन प्रचण्डले बेला–बेला विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजान्छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित प्रचण्ड र सीता म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा पुगेर स्नान गरेको तस्वीर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सीताको उपचारकै सिलसिलामा तातोपानी कुण्डमा पुगेको प्रचण्ड परिवारका सदस्य बताउँछन् ।
अमेरिका लैजानुअघि सीताको उपचार भारत र सिंगापुरमा पनि गरिएको थियो । तर, पनि उनको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालका डा. प्रत्युष श्रेष्ठका अनुसार पीएसपी पार्किन्सनको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था हो । रोग यो पूर्णरुपमा निको हुँदैन, रोकथाम गर्न मात्रै सकिन्छ ।
यसको उपचारविधि भनेको औषधि र अपरेसन हो । औषधिले ठीक नभएमा अपरेसन गर्नु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा बिग्रिएर यो समस्या आउँछ त्यो ठाउँमा मुटुमा पेशमेकर राखेजस्तै दिमागमा पनि राखेर उपचार गर्न सकिन्छ ।’
डा. श्रेष्ठले भने, ‘पीएसपीको उपचार हामीले गर्दै आएका छौं । तर, सीता दाहालजीको समस्या कस्तोखालको हो, कुन स्टेजको हो, त्यो नहेरी यहाँ उपचार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिँदैन ।’